စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၇၈ ) ( ရှက်မိပါတယ် ၊ တောင်းပန်ပါတယ် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၇၈ ) ( ရှက်မိပါတယ် ၊ တောင်းပန်ပါတယ် )
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၇၈ ) ( ရှက်မိပါတယ် ၊ တောင်းပန်ပါတယ် )
Posted by Foreign Resident on Jan 29, 2015 in Think Different | 33 comments
ငါတို့ တာဝန်မကျေ ခဲ့ဘူး ၊ အခုတော့ ညီငယ်တွေ အသက်သွေးချွေးတွေ ထပ်ရင်းနေရပြီ ။
– တောင်းပန်ပါတယ် ၊ ညီငယ်တို့ရေ ။
Photo Credit to Original Uploader.
– နောက်ဆုံး တော့ ၊ ဒါပါဘဲလေ ၊
ခေတ် အဆက်ဆက် မှာ ၊ တိုင်းပြည် အတွက် ၊ တရား မျှတမှု အတွက် ၊
ဘာအကျိုး အမြတ်ကိုမှ မမျှော်ကိုးဘဲ ကိုယ်ကျိုး စွန့်ရဲ ၊ အသေခံရဲတာ ၊
ဒီ ဖြူ စင်တဲ့ ၊ အရောင် မစွန်းသေးတဲ့ ၊ စွန့်လွှတ်ရဲတဲ့ ကျောင်းသားတွေဘဲ ရှိတာလေ ။
သူတို့ကတော့ ခေတ် အဆက်ဆက် မှာ မတရားမှုတွေ ရှိနေတိုင်း ၊
ရှေ့ဆုံးကနေ ၊ ရင်မြေ ကတုတ် လုပ်ပြီး ၊ တွန်းလှန်နေဦးမှာပါဘဲလေ ။
ကျနော် ကတော့ ၊ ကိုယ်တွေရဲ့ ခေတ်တွေမှာတုန်းက ၊
ဒီလို မတရားမှုတွေ ဒင်းကြမ်းဖြစ်နေတဲ့ စံနစ်ဆိုးကြီးကို မဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ဘဲ ၊
ညီငယ် ကျောင်းသားတွေကို ဒီစံနစ်ဆိုး ပါတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုသာ လက်လွှဲပေးနိုင်လို့ ။
– ပြောရရင် ၊ အာဏာရှင် စံနစ်ဆိုးတွေကို ကိုယ့်ခေတ်မှာ အပြီးပြတ် မ တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့လို့ ၊
ကျနော်တို့ ခေတ်ရဲ့ တာဝန်ကို ကျနော်တို့ မကျေ ပွန်ခဲ့လို့ ။
အခု ညီငယ် ကျောင်းသားတွေ က ကိုယ်တွေရဲ့ ၊ မ ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ ၊
မကျေ ပွန်ခဲ့တဲ့ တာဝန်တွေကို ဆက်ထမ်းဆောင်နေရတာ မြင်တိုင်း ။
သတ္တိ သွေးနည်းခဲ့တဲ့ ၊ တာဝန်မကျေ ခဲ့တဲ့ ကိုယ့် ဘဝ အတွက် ၊
ကျနော် အရှက်ရမိပါတယ် ။ ဝမ်းနည်း ခံစားရပါတယ် ။
ခေတ်ကောင်း ၊ စံနစ်ကောင်း ၊ ပါတ်ဝန်းကျင်ကောင်း ကို ၊
ညီငယ် ကျောင်းသားတွေကို လက်လွှဲ မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ၊
အရှက်ရ မိပါတယ် ၊ တောင်းပန်ပါတယ် ၊ ညီငယ် ကျောင်းသားတို့ရေ ။
အကိုကြီး တစ်ယောက် အနေနှင့် ၊ ငါတို့ တာဝန်မကျေ ခဲ့ဘူးကွာ ၊
အခုတော့ ညီငယ်တွေ အသက်သွေးချွေးတွေ ထပ်ရင်းနေရပြီ ။
– တောင်းပန်ပါတယ် ။
-ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ / ၄ ရက် မြန်မာပြည် အင်တာနက်က စုတ်ပြတ်နေတာဘဲ ။
-သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားလေးတွေကို ၊
-တောင်သာ မှာ ဆီးရိုက်ဖို့ တမင်ပိတ်ထားသလား မှတ်ရတယ် ။
-ဒင်းတို့ ဒီလူမမယ် ကျောင်းသားလေးတွေကို ထိလို့ကတော့ – – – – –
.ကျောင်းသားကိစ္စ ရိုးရိုးပဲ တွေးတာပါ
.ကျုပ်တို့ မလုပ်ရဲခဲ့လို့ သူတို့ လုပ်နေရရှာတာ လို့ပဲ မြင်ပါတယ်
.နည်းမှန်ကို ပြတဲ့သူတွေလည်း လုပ်ပြတတ်ရင်ပြပါ
.ကိုဖေါလိုပဲ ပြောရတော့မှာပါပဲ“- တောင်းပန်ပါတယ် ၊ ညီငယ်တို့ရေ ။” :p:
မမကြီးတို့ခေတ်တုံးကလို ပျာရည်နဲ့ ၀မ်းချမခံပါနဲ့ / အညာမမိပါစေနဲ့လို့
ဒီလူတွေက မွေးထဲက ယုတ်မာလာတဲ့သူတွေ … ခလေးတို့ဘေးကင်းကျပါစေ
အခု မန်းကနေစတင်တာထွက်ပြီး ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြချီတက်နေတယ်၊ အဲလိုဘဲ ဧရာဝတီ၊ပုခုက္ကူ၊ ထားဝယ်၊ချောက် တို့ကလည်း အသီးသီးသပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြချီတက်ကြမယ်။
ကျောင်းသားတွေ လမ်းလျှောက်ချင်လို့ လျှောက်ကြတာမဟုတ်ဘူး လိုချင်တာရှိလို့ လျှောက်ကြတာပါ။
သူတို့ဘာလိုချင်တာလဲ “ငါတို့ထားသလိုနေ ငါတို့သတ်မှတ်ချက်တိုင်းလိုက်နာ ” ဆိုပြီး အစိုးရ၏ ခေတ်အဆက် အာဏာသုံးရေးဆွဲ ထားတဲ့ ပညာရေးမူစနစ်ကိုမကြိုက်လို့ ဘက်မျှညီသော ပညာရေးစနစ်ကိုလိုလားသည့် အတွက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းနေခဲ့ကြတယ် မြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်ကသတ်မှတ်တဲ့ ဘွဲ့တွေရလာကြတယ် အဲဒီပညာရေးစနစ်ရဲ့ ဘွဲ့တွေ နိုင်ငံတကာနဲ့ယှဉ်ပြီးအသုံးဝင်ရဲ့လား၊ ဘွဲ့ရတာနဲ့ ကိုယ်ရတဲ့ဘွဲ့နဲ့ ပက်သက်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အဆင်သင့်ရနေပြီလား ပြန်ပြီးစဉ်စားကြည့်ပါ။ အခုရေးဆွဲထားတဲ့ ပညာရေးစနစ်က ကောင်းလှပါတယ် တရားပါတယ်ဆို အဘတွေက သူတို့သား သမီးတွေကို မြန်မာပြည်ပညာရေးကို အထင်ကြီးပြီး စာသင်စေပါလား သူတို့သားသမီးကျတော့ ဘာကြောင့်နိုင်ငံခြား ပညာသင်စေတာလဲ အဖြေကရှင်းပါတယ် ဒီကပညာရေးစနစ်က နိုင်ငံတကာ လူတောမတိုးလို့ပေါ့ဗျာ။
ဒီလိုတွေခံစားရတာများတော့လဲ အဲဒီဖိနှိပ်ခံပညာရေးစနစ်က လွတ်ချင်ကြတဲ့အခါ တွန်းလှန်ဆန္ဒပြမှုတွေ ဖြစ်လာတာမဆန်းပါဘူး၊ အဲဒီလိုဆန္ဒပြချီတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေကို ရှုတ်ချပြစ်တင်ပြောနေတဲ့ သူတွေကို စကားတစ်ခွန်းမေးချင်ပါတယ် အသင်တို့နေတဲ့အိမ် သို့မဟုတ် ဈေး ကို ပြောင်းကိုပြောင်းရမယ် မပြောင်းရင် ဘူဒိုစာနဲ့ ဘယ်နေ့ထိုးမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်များရောက်လာခဲ့ရင် အထုပ်ကလေးပိုက်လို့ ထိုးကြပါဗျာလို့ ပြောင်းသွား ပါတော့မယ်ဆိုပြီ ထွက်မှာလား မပြောင်းရေး ဆန္ဒပြကြမှာလား? ကိုယ့်ထိရင်နာတတ်ကြတဲ့သူတွေများပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျောင်းသားက တစ်ဖက်သတ်ဆန်တဲ့ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာလည်း သူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကို သူတို့လုပ်တာပါ။ ကျုပ်တော့မှားတယ်လို့မဆိုဘူးဗျာ။
တစ်ခုဘဲကျောင်းသာထုကြီး အကြမ်းဖျက်မှုတွေ မပါပါစေနဲ့ အဲဒါလေးတော့သတိထားထိန်းသိမ်းကြရပါ လိမ့်မယ်၊ အဲဒါတွေရောနှောပါလာရင်တော့ အစိုးရလက်ခမောင်းခတ်ချိန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
မင်းတို့၏ အရေးတော်ပုံ အောင်မြင်ပါစေ။
အခုချိန်ထိ..ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်… သဲတစ်ပွင့်အဆင့်က မတက်သေးလို့…
ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များဘက်မှ တောင်းဆိုထားသည့် အချက် ၁၁ ချက်မှာ
(၁) ပညာရေးမူဝါဒနှင့် ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ဆက်စပ်ဥပဒေများ ရေးဆွဲရာတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆရာဆရာမ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ရန်ကိစ္စ၊
(၂) ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ၊ ဆရာသမဂ္ဂများ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းထူထောင်လှုပ်ရှားခွင့်နှင့် ၎င်းသမဂ္ဂများ တည်ရှိမှုအပေါ် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုရေးကိစ္စ၊
(၃) လက်ရှိပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်သော အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေတွင် ပါဝင်သည့် အမျိုးသားပညာရေး ကော်မရှင်နှင့် တက္ကသိုလ်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကိစ္စ၊
(၄) ဒေသအလိုက်နှင့် ကျောင်းအလိုက် လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိစ္စ၊
(၅) လက်ရှိကျင့်သုံးလျက်ရှိသော စာမေးပွဲစနစ်နှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စနစ်များ ပြင်ဆင်ရန်ကိစ္စ၊
(၆) ကျောင်းသားများ လွတ်လပ်စွာ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင်လေ့လာ စူးစမ်းသင်ယူနိုင်သည့် သင်ကြားနည်းစနစ်များ ပြောင်းလဲရန်ကိစ္စ၊
(၇) တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများ၏ ဘာသာစကား လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် မိခင်ဘာသာစကား အခြေပြုဘာသာစကားစုံ ပညာရေးစနစ် (mother tongue based multi-lingual education) ကို အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေတွင် ထည့်သွင်း ပြဋ္ဌာန်းရန်ကိစ္စ၊
(၈) မသန်စွမ်းကလေးများ အပါအဝင် ကလေးအားလုံးအတွက် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေး (inclusive education) ကိစ္စ၊
(၉) ကျောင်းသားအရေးအခင်းများကြောင့် ကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရသည့် ကျောင်းသားများ ကျောင်းပြန်လည် တက်ရောက်ခွင့်ကိစ္စ၊
(၁ဝ) ပညာရေးအသုံးစရိတ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံး အသုံးစရိတ်၏ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း သတ်မှတ်နိုင်ရေးကိစ္စ၊
(၁၁) အခမဲ့ မသင်မနေရ ပညာရေးစနစ်ကို မူလတန်းအဆင့်သာမက အလယ်တန်းအဆင့်အထိ တိုးမြှင့်ကျင့်သုံးရေးကိစ္စ အစရှိသည်တို့ ဖြစ်သည်။
US က..၂၀၁၄က သုံးတဲ့ဘတ်ဂျက်..။
US GDP: $18,219.4 bln
တိုင်းပြည်ဘက်ဂျက်က.. ဘယ်လောက်ရှိသလည်းတော့မသိ.. ဂျီဒီပီက.. သန်း၆၀လောက်မို့.. ၂၀ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်.. ၁၂ဘီလီယံဒေါ်လာ..။
ဘကပညာရေးကို ဖျက်သိမ်းနိုင်ပြီး.. ကျောင်းဆရာတွေက.. ပညာသင်ပေးတဲ့… စနစ်ရောက်လာရင်.. တိုင်းပြည်အနာဂါတ် နောက်အနှစ်၂၀လောက်ဆိုကောင်းလာနိုင်ခြေရှိတာမို့…
(၁၁) အခမဲ့ မသင်မနေရ ပညာရေးစနစ်ကို မူလတန်းအဆင့်သာမက အလယ်တန်းအဆင့်အထိ တိုးမြှင့်ကျင့်သုံးရေးကိစ္စ
အခုတလောတင်.. အိုဘားမားက.. အထက်တန်းပညာရေးကျော်ပြီး.. ကောလိပ်တွေအထိ..အခမဲ့ပညာရေးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းကြိုးစားနေတာမို့… ဒါကလည်း… စိတ်ဝင်စားစရာပါ..။
မသင်မနေရတော့မဟုတ်..။ ဗမာကျောင်းသားတွေက.. အခမဲ့တင်မက.. မသင်မနေရပါတောင်းဆိုတာမို့…
အလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့… ကျောင်းသားအရွယ်တွေအလုပ်မလုပ်ရင်.. တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ..ဂျီဒီပီကျမှာအမှန်ပါ…။
အဲဒီဝင်ငွေကို.. အစားထိုးဖြည့်ဖို့.. ဘယ်လိုအစီအစဉ်ရှိသလည်းတော့သိချင်…။
အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့.. ကိုရင်.. သံဃာတွေအပေါ်..အဲဒီဥပဒေက… ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်မလဲ..သိချင်…။
ခေတ်လူငယ်တွေကို အနာဂတ်မှာ တိုင်းပြည်အတွက် နေရာပေးချင်ရင် အဲဒီအသုံးစရိတ်ရာခိုင်နှုန်း ကိုစဉ်းစားပေးလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
အဲ စစ်လူငယ်တွေကိုဘဲ အနာဂတ်မှာ တိုင်းပြည်အတွက် နေရာဆက်ပေးချင်ရင်တော့ ကာကွယ်ရေးအသုံး စရိတ်ကိုဘဲ တိုးပေးဖို့စဉ်းစားနေစဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျ။
တောင်းဆိုတဲ့ထဲ အဲဒီ (၁၀)နဲ့(၁၁) ကို ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်းစားနေတယ် သဂျီးရေ။
Eleven မှာ.. အစိုးရတောင်းထားတဲ့ဘက်ဂျက်.. ကျပ်ဘီလီယံ၂၀၀၀၀ တဲ့..။
ကျပ်… ၁ဘီလျံက.. ဒေါ်လာ ၁သန်းလောက်ရှိမယ်ထား…
တတိုင်းပြည်လုံးဘက်ဂျက်က.. ဒေါ်လာ ၂၀ဘီလီယျံလောက်ပေါ့…။
အဲဒါရဲ့.. ၂၀ရာခိုင်နှုန်းက.. ဒေါ်လာ ၄ဘီလီယျံ…
အဲဒါတကယ်ဆိုရင်တော့.. တော်တော်.. တော်တော့်ကို.. လိုသေး..။
တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့က အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ကျောင်း သားသပိတ်ကို ဒီကနေ့ ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ရက်နေ့ကစပြီး ခေတ္တရပ်နားကြောင်း ဆန္ဒပြခေါင်း ဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုမင်းလွင်ဦးက ပြောပါတယ်။
“အစကတော့ ဒီကနေ့မှာ ကျနော်တို့ထွက်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့ တွေ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာ ၁ ရက်နေ့ ၄ ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲစမယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ထားဝယ် ၆ ဦးကော်မတီက ဆွေးနွေးထားတာရှိတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့ သပိတ် မှောက်နေစဉ်အတောအတွင်းမှာ သူတို့ဘက်က ၄ ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို တိုင်းသိပြည်သိ တရားဝင်ကမ်းလှမ်းလာတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ သပိတ်ကို ရပ်နားဖို့ အဲဒီကတည်းက ကျနော်တို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာဆိုတော့ ဒီကနေ့ ကျနော်တို့ မထွက်တော့ဘူး။ သပိတ်ကို ခဏ ရပ်လိုက် တာပေါ့၊ ဒီနေ့ပဲ ကျနော်တို့ သပိတ်စခန်းကနေပြီး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ကြတယ်။ ဒါပမေယ့် ကျနော်တို့ တယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်တော့ လုပ်ထား တယ်ဗျာ။ ”
ထားဝယ်မြို့က သပိတ်ကျောင်းသားတွေဟာ ရေနန်းတောင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သပိတ်စခန်းဖွင့်ပြီး ထားဝယ်မြို့ပေါ်က ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို လိုက်လံစည်းရုံး လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ပခုက္ကူမြို့က ကျောင်းသားသပိတ်ကလည်း ဒီကနေ့ကစပြီး ချီတက်မှုတွေမလုပ်တော့ဘဲ ရပ်နားထားလိုက်ပြီလို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုဇေယျာလွင်က ပြောပါတယ်။
“ဒီကနေ့ ပခုက္ကူလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးကို မနေ့က ကျနော်တို့ နေပြည်တော်မှာ သွားရောက်ဆွေးနွေးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေကို ကျောင်းသားတွေအားလုံးကို ရှင်းပြတယ်။ ပြီးတော့ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံကို ပခုက္ကူကျောင်းသားသမဂ္ဂအနေနဲ့ရော၊ ဒီမိုကရေစီ ပညာရေးလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ကော်မတီအနေနဲ့ရော ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတယ်။ ကျနော်တို့ ပြောခဲ့တာက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုစပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံး သပိတ်ချီတက်လှုပ်ရှားမှု လုံးဝမလုပ်ဘူး။”
ဧရာဝတီတိုင်းက ဇန်န၀ါရီ ၃၀ ရက်နေ့မှာမှ စတင်ထွက်ခွာမယ့်ကျောင်းသားအဖွဲ့ကတော့ သူတို့ နဂိုစီစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်ထွက်ခွာဖို့ရှိပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲစမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ရပ်နားသင့်ရင် ရပ်နားဖို့ ရှိပါတယ်။
“လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက် ၁ ရက်နေ့မှာ သပိတ်စစ်ကြောင်းကို ရပ်ထားဖို့ အကြောင်းပြန်လာရင် ကျနော်တို့က ရပ်ထားဖုိ့အစီစဉ်ရှိပါတယ်” လို့ ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူး ကိုတေဇာက ပြောပါတယ်။
မန္တလေးကနေ ထွက်ခွာခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင်းကတော့ ဒီကနေ့မှာ ပုပ္ပားကနေ ကျောက်ပန်းတောင်းကို ဆက်လက်ချီတက်နေပါတယ်။
“ကျနော်တို့ကတော့ သပိတ်ကို လက်ရှိအချိန်မှာ မနားနိုင်သေးဘူး။ ရန်ကုန်အထိသွား မယ့် လမ်းကြောင်းကို ဆက်သွားဖို့ အစီစဉ်ရှိတယ်။ သူတို့ဘက်က တစုံတရာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုက ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်သည်ဖြစ်စေ ဆက်သွားဖို့ရှိတယ်။ သူတို့ဘက်က ကျနော်တို့ တောင်းဆိုချက် ၁၁ ချက်ကို လိုက်လျောသည့်တိုင်အောင် ဥပဒေအသီးသီးကို အဲကျရင် ကားစီးသွားပြီး မြို့တွေမှာ အောင်ပွဲခံတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ရန်ကုန်ကို ပြန်ဝင်ဖို့အစီစဉ်ရှိပါတယ်” လို့ သပိတ်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုမင်းမင်းဇော်က ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဆွေးနွေးပွဲစတင်မယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာတော့ ရောက်တဲ့မြို့မှာ ဆက်ချီတက်ခြင်း မပြုဘဲ ဆွေးနွေးပွဲသတင်းကို အဲဒီမြို့မှာပဲ စောင့်နားထောင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို သပိတ်မှောက်ထားတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေးအတွက် သတ်မှတ်ကာလရက် ၆၀ အလွန် လှုပ်ရှားမှုကို ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်နေ့က မန္တလေးနဲ့ ထားဝယ်မြို့မှာ စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် လေးပွင့်ဆိုင် (အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက်တို့) ဆွေးနွေးပွဲကို လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ စတင်ဖို့ အစိုးရနဲ့ ကျောင်းသားသပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်ဆွေးနွေးပွဲမှာ သဘောတူညီကြပါတယ်။
” နေသာသလို နေလည်း ရပါတယ် ”
အရွယ်ငယ်က အော်ခဲ့ပြီး လမ်းတွေလျှောက်
ကျွန်မတို့ ကျောင်းသားဘဝ အချိန်တုန်း မတိုင်ခင်ကလဲ ကျောင်းသားသပိတ် ဖြစ်တယ်။
ဒီ လူ တွေ ရှိဆဲ။
ကျွန်မတို့ အချိန်မှာလဲ ကျောင်းသား သပိတ် ဖြစ်တယ်။
အဘ တို့ ကြီးစိုးမြဲ။
ကျွန်မတို့ နောက်ပိုင်း လဲ အခု လဲ ကျောင်းသား သပိတ် ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီအတိုင်း ဒီလူ တွေ ကို မပြောင်း နိုင်သေးသ၍
အခု ကျောင်းသားတွေ တောင်းနေတဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေရစေဦး။
ကျွန်မ ဘက်က ကြိုက်ကြေးထပ်ပြီး လောင်း ရဲ တယ်။
အခု ကျောင်းသား တွေ ရဲ့ နောက် မျိုးဆက် တွေ လဲ တစ်ချိန်မှာ လမ်းပေါ် ဆက်ထွက် ရ ဦးမယ် ဆိုတာကို။
ဒီတော့ အခု ကလေး တွေ လဲ နောင် မှာ နောက်လူ တွေ ကို ရှက်ရမဲ့ အတူတူ ကျွန်မ တို့လဲ သူတို့ ကို ရှက်မနေတော့ ပါဘူး။
အခု ဖြစ်နေတာ ကို ကျွန်မ ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက် သက်သက် နဲ့ ဝေဖန် ရရင်
အချိန်အခါ မမှန်တဲ့ လုပ်ရပ် လို့ သာ မြင်ပါတယ်။
တကယ်ဖြစ်သင့်တာက အခုလာမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါနိုင် ဖို့ အတွက် အားလုံး ဝိုင်းပြီး ပံ့ပိုး နေသင့်တာ။
သူ့ သမ္မတ ဖြစ်ဖို့ ကို အရေးထားလို့ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ပြောပါရစေဦး။
လောလောဆယ် ဒီ အမျိုးသမီးကြီး တစ်ယောက် ကဘဲ ဒီ အစိုးရ ရဲ့ ကြိုးဆွဲရုပ် မဟုတ်တာ လို့ ယုံကြည်လို့ပါ။
ရိုးရိုးသားသား ဝန်ခံ ရရင် သူ့ပါတီ က လဲ တိုင်းပြည် ကို စူပါ ဒူပါ ကောင်းအောင် လုပ်သွားနိုင်မယ် မမှန်းပါဘူး။
သူတို့ ထဲ မလဲ အားနည်းချက်တွေ အပြည့် မြင်နေရတာ။
ဒါပေမဲ့ နေမြဲ အဘ များ ကိုဖယ်နိုင်ဖို့ သူတို့ နဲ့ အစားထိုးပစ်လိုက်မှဘဲ ရမှာမို့ပါ။
သူတို့ မရှိရင် အနည်းဆုံးတော့ တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာ တွေ အခိုးခံ ရတာ နည်း သွားမယ်။
ဟိုလူ့ တစ်မျိုး ဒီလူ့ တစ်ဖုံ ဥပဒေ ကစားတာတွေ နဲ သွားမယ်။
တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးမှု ပိုကောင်းလာမယ်။
မီဒီယာ ပွင့်လင်းမှု အားရှိလာမယ်။
အဲဒီနောက်မှာ ချစား တာတွေ နဲသွားမယ်။
တကယ် လုပ်နိုင်သူ ကြိုးစားသူ နေရာ ရနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ကို မျှော်ကိုး လို့ ရလာမယ်။
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး တွေ ကို မှန်ကန်တဲ့ လမ်းပေါ်ကို ရောက်အောင် တွန်းတင်ပေးနိုင်မယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သာ ဦးဆောင်မှု ပေးခဲ့ ရင် လူ ကို လူ လို မြင်တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်မယ်လို့လဲ အကြွင်းမဲ့ ယုံမိတယ်။
နောက်ပိုင်း မကြိုက် ရင် ကိုယ်ကြိုက်သူ ပြန်တင်ပေါ့။
ဖြစ်သင့်တာက ဒီအချိန်မှာ လွှတ်တော်ထဲ အခြေခံ ဥပဒေ ကို ပြင်ဖို့ ဖိအား ပေးနေရမဲ့ အချိန်မှာ
ဘုန်းကြီး တစ်ချို့ ရဲ့ ဖျက်မြင်း ဥပဒေ တွေ ဝင်ခဲ့ ပြီ။
အခု လဲ ကျောင်းသားတွေ ရဲ့ ပညာရေး ဥပဒေ က ဝင်ပြန်ပြီ။
ဦးစံရှား အတွေး နဲ့ တွေးလိုက်ရင်
ဒီလို မ ဖြစ်ဖြစ်အောင် ကို အချိန်ကိုက် ပြီး ထည့် နေသလား တွေး ရတယ်။
အစစ် ရိုးရိုးသားသား ဟုတ်မဟုတ် တော့ သက်ဆိုင် သူတွေဘဲ သိမှာဘဲ။
သိက္ခာမဲ့စွာ မျက်နှာပြောင်ပြောင် နဲ့ လမ်းလွှဲ ကျွမ်း လှ တဲ့ အဘ တို့ရဲ့ စနက် ကင်း နေမယ်လို့ လုံးဝ (လုံးဝ) မယုံ ပါ။
ကျောင်းသားအရေး ကတော့ ရိုးသားပါတယ် ပြောရင်လဲ
အချိန်မှား နေတဲ့ အသိပညာမဲ့ လှုပ်ရှားမှု လို့ ဘဲ မြင်ပါတယ်။
အခု ကျောင်းသား တွေ တောင်းတာ တွေ က (ဘတ်ဂျက်) ကလွဲ လို့ သာမာန်အားဖြင့် ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်စရာမရှိ။
ဘတ်ဂျက် ကတော့ အလွယ်ချက်ခြင်းချပေးလို့ မရနိုင်တာတော့ သဘောပေါက်သင့်တယ်။
နောက်ပြီး မြန်မာလိုချည်း စာကို ပြန်သင်ဖို့ ကလဲ ကောင်းကျိုး တကယ်ဖြစ်မဖြစ်။
နိုင်ငံတကာ နဲ့ တကယ်ဘဲ ရင်ဘောင်တန်း ဝင်ဆန့်ချင်ရင် အင်္ဂလိပ်စာ ညံ့ နေလို့ မရတာ အသိပါ။
ဒီ ဥပဒေ ပြင်လဲ ပညာရေး မှာ စိတ်ဓာတ် ကောင်းမရှိကြရင် ရေစုန် မျော ဆဲ မျော နေမှာဘဲ။
ဒီ အဘ တွေ နဲ့ ကတော့ စိတ်ဓာတ် တွေ ပို ညံ့ ဖို့ ဘဲ ရှိတယ်။
အခု နှစ်ကုန် ပိုင်းမှာ ထုတ်ပြလာ မဲ့ အစွယ် တွေ ကို ချိုးဖို့ ကို အခု ချိန်မှာ အားယူ ထားကြပါ။
အဲဒီ အား တွေ ကို တစ်ခြားမှာ မသုံး ကြပါနဲ့လား လို့ သာ ပြောချင်ပါတော့တယ်။
ကျွန်မ တော့ အခုချိန် မှာ မရှက် သေးပါ အဘဖော ရေ။
၂၀၁၅ အလွန် ကိုယ့်မှာ ရထားခဲ့ တဲ့ ဘုရင်မ ကို ထုတ်မကစားနိုင် အောင် ညံ့လွန်း မှသာ ရှက် ပါတော့မယ်။
အစိမ်းတွေ.. အ၀ါတွေထက်… အရောင်မစွန်း.. ဖြူစင်အပြစ်ကင်းပါတယ်..။
ကမ္ဘာ့လူထု.. သိအောင်အထိ… အချိန်ဆွဲဆန့်လို့ရအောင်ကတော့…
ကျောင်းသားသမဂ္ဂ မူလအဆောက်အဦင်္ဟောင်းနေရာအထိ.. အားလုံးချီတက်သွားစုကြပြီး..
ရာသီဥတုသာယာနေပြီမို့… အတူတကွအုပ်မြစ်ချကြဖို့.. သစ္စာဆိုကြစေချင်..။
အဆုံးအထိချီတက်ကြတာ..။ ခွပ်ဒေါင်းသွေးဟာ.. စလုပ်ပြီဆိုရင်တော့ အဆုံးထိလုပ်စေချင်..။
ညှိနှိုင်းပွဲမှာ.. လမ်းလျှောက်အားကစားအနေနဲ့ဆက်ချီတာပါဆိုပြောပြီး.. ရန်ကုန်အထိဆက်တက်..။
အဲဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့ သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ဟာ.. နောင်မြန်မာပြည်သမ္မတပဲ…။
Read more: Civil Rights March on Washington (History, Facts, Martin Luther King Jr.) http://www.infoplease.com/spot/marchonwashington.html#ixzz3QFxUGN10
Kyaw Zwa Min Htut
ဒီကျောင်းသားသပိတ်က အခြေအနေ၊ အချိန်အခါ သင့်တယ်လို့ ပြောရမယ်။ ခုကာလက အများ သိကြတဲ့အတိုင်း ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းရေးလို့ အစိုးရက အော်နေတဲ့ ကာလ။ ဒီကာလမှာ ဖြစ်လာသမျှ အပြောင်းအလဲက (ဦးကျော်ဝင်း ပြောသလိုဆို အရွေ့က) ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူတွေ အတွက် ဆိုးကွက်ရော ကောင်းကွက်ပါ ရှိတယ်။
ကောင်းတာတွေ ပြောရရင် … အစိုးရဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဗန်းပြပြီး နိုင်ငံတကာက နည်းမျိုးစုံ တောင်းရမ်းထားတဲ့ ဒေါ်လာတွေနဲ့ စားပိုးနင့်နေတယ်။ ဟိုဘက်က ပိုက်ဆံပေးပြီး သူတို့ ခြေလှမ်းတွေကို ချည်တုတ်ထားတာ တချို့ ရှိတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ သူတို့ အတင်း ဖန်တီးထားရတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ပုံရိပ်ကလေးက နိုင်ငံတကာမှာ မှေးမှိန်စ ပြုနေရာက လုံးဝ ပျောက်ကွယ် သွားမှာကို စိုးရိမ်နေရတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျောင်းသားတွေကို ရိုက်သတ်ချင်တာတောင် ချိန်ဆနေရတယ်။
ဟိုတုန်းကလို လူမသိ သူမသိ လုပ်လိုက်ဖို့ အရမ်း ခက်လာတာလဲ ပါလိမ့်မယ်။ မီဒီယာတွေက အကောင်းဆုံး အနေအထား မဟုတ်သေးပေမယ့် ဟိုတုန်းကထက် အများကြီး ပိုပြီး အားကောင်းလာတယ်။ လူတွေကြားမှာ ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာတွေ ရောက်လာတယ်။ သတင်းတွေ မြန်လာတယ်။ သူတို့အတွက် ကိုင်တွယ်ဖို့ အခက်ဆုံး ကိစ္စက တော်တော်များများ ပြောရဲဆိုရဲ ပိုရှိလာတာပဲ။ ဒါက အပြောင်းအလဲ ကာလရဲ့ ပကတိ လက်ရှိ အခြေအနေပါ။ ဆိုးတာတွေတော့ မပြောတော့ဘူး။
လက်ရှိ ကျောင်းသားသပိတ်က အပြောင်းအလဲရဲ့ ကောင်းကွက်တွေကို ကောင်းကောင်း အသုံးချနိုင်တာကို တွေ့ရတယ်။ ကျနော်တို့က အပြောင်းအလဲ ကာလမှာ ရလာတဲ့ space ကို အသုံးချနေပါတယ်လို့ ပြောပြီး နိုင်ငံခြား စင်မီနာတွေပဲ လိုက်တက်၊ အစိုးရနဲ့ မငြိစွန်းတဲ့ ပရောဂျက်ပဲ လိုက်ရှာနေတဲ့ ဆယ်လီဗရစ်တီ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း တချို့ (အများစု မဟုတ်သော်လည်း) ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုကလေးတွေက ရလာတဲ့ Space ကို တကယ် အသုံးချနေတာ ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီကလေးတွေဟာ မိုက်ရူးရဲတွေ မဟုတ်ဘူး။ အတိုးအဆုတ် ရှိတယ်။ ညှိနှိုင်းတတ်တယ်။ ချင့်ချိန်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဘာလုပ်နေလဲ ကိုယ်သိကြတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပက်သက်ပြီး သူတို့ အများကြီး တွေးထားတယ်။ သူတို့မှာ Vision ရှိတယ်။ Mission ရှိတယ်။ Method ရှိတယ်။
ဒါ့ကြောင့်လဲ ဒီသပိတ်က တောင်းဆိုလာတဲ့ အချက်တွေက မလိုက်လျောနိုင်ဘူးလို့ ငြင်းဖို့တောင် ခက်ခဲတဲ့ အရမ်း သင့်တော် မှန်ကန်တဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေ ဖြစ်နေတာပဲ။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက် ၁၁ ချက်လုံးကို ကြည့်ရင် လက်ရှိ အစိုးရနဲ့ စစ်တပ်ကို နိုင်ငံရေးအရ ခြိမ်းခြောက်ထားတာ တခုမှ မပါဘူး။ ပညာရေး သီးသန့် တောင်းဆိုချက်တွေ၊ ကျောင်းသားနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကိုပဲ တွေ့ရမယ်။ လက်ရှိ အစိုးရနဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ အာဏာကို ဘယ်တောင်းဆိုချက်ကမှ တိတိပပ စိန်ခေါ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။
ဒါဆို ဒီကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုကို အာဏာပိုင်တွေက ဘာလို့ အပြင်းအထန် ရန်လိုနေရတာလဲ???
ရှင်းပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေ၊ လူငယ်တွေနဲ့ တခြား ပြည်သူတွေကြားမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု Confidence ရသွားမှာ စိုးလို့ပါ။ စနစ်တကျ နည်းမှန်လမ်းမှန်၊ တက်ညီလက်ညီနဲ့ ဖိအားပေး တောင်းဆိုနိုင်ရင် အောင်မြင်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်မျိုး၊ ကွန်ဖိဒန့်မျိုး ပြည်သူတွေ၊ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ကြားမှာ ရသွားမှာကို အာဏာပိုင်တွေက ကြောက်နေလို့ပါ။
ဖိနှိပ်ခံထားရတဲ့ အခြေအနေ တခုမှာ ခေါင်းငုံ့ခံတာနဲ့ ပြန်လည် အုံကြွတာရဲ့ ကြားထဲက စည်းကလေးက တကယ်ကို ပါးပါးလေးပါပဲ။ အောင်မြင်တဲ့ အာဏာရှင် စနစ်နဲ့ ကျရှုံးသွားတဲ့ အာဏာရှင် စနစ်တွေ ကြားမှာ ဒီစည်းကလေး တခုပဲ ခြားနားသွားတာ။ မြောက်ကိုရီးယား၊ လစ်ဗျား၊ အီရတ်၊ ဆိုဗီယက် ဥပမာတွေ အများကြီးပါ။
ဒီတော့ အဲဒိ စည်းကလေး ကျိုးပေါက်သွားမှာကို အာဏာပိုင်တွေက သေအောင် ကြောက်တယ်။ အဲဒိ စည်းကလေး ပေါက်မပေါက် ဆိုတာက စောစောက ပြောတဲ့ ငါတို့ လူညီရင် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ လူထုကြားက ယုံကြည်မှု အပေါ် အများကြီး မူတည်တယ်။
ဒီတော့ ဒီယုံကြည်မှုမျိုး လူထုကြားမှာ ကြီးထွားမလာအောင် လုပ်ဖို့က အာဏာရှင်တိုင်းရဲ့ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဘာလုပ်သလဲ???
ငါတို့လုပ်လို့ ဘာမှ မထူးပါဘူး ဆိုတဲ့ အငုံ့စိတ်ကို ပြည်သူတွေကြား နည်းမျိုးစုံနဲ့ ရိုက်သွင်းတာပဲ။ ဗမာပြေမှာတော့ တော်တော်လေး အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ပြည်သူက ရုန်းကန်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်လိုက်တိုင်း ပြင်းထန်ရိုင်းစိုင်းတဲ့ တုံ့ပြန်မှုကြောင့် အမြဲ ရှုံးခဲ့ရတယ်။ အဲဒိတော့ ပြည်သူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု မရှိကြတော့ဘူး။
ဖိနှိပ်သူနဲ့ တိုက်ပွဲမှာ ဖိနှိပ်ခံတွေဖက်က နိုင်ပွဲတစ်ပွဲတော့ လိုနေတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ခရီးကြမ်းရှည်ကြီးမှာ ဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူတွေအတွက် အားဆေး ဖြစ်လာအောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားကြရမှာ။ ဒါမှ ပြည်သူတွေ ကြားမှာ အငုံ့စိတ် ပျောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ပြန်ရမှာ။
အခု သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားတွေဟာ ဒီအငုံ့စိတ်အောက်က ရုန်းထနေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု နည်းနည်းချင်းစီ ရလာကြလိမ့်မယ်။ နောက်ပွဲတွေမှာ အင်အားတွေ ပိုပို ရှိလာမယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရှေ့ကို တဖြည်းဖြည်း တိုးရင်း တနေ့တော့ ပန်းတိုင် ရောက်လိမ့်မယ်။
အာဏာပိုင်တွေဟာ ဒါကို ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်တဲ့အတွက် သူတို့ကလဲ နည်းမျိုးစုံ သုံးပြီး ဦးကျိုးအောင် လုပ်လိမ့်မယ်။ ရအောင် ဖိလိမ့်မယ်။ သူတို့ဖက်က ယုံကြည်မှု မပျက်အောင်၊ ပြည်သူဖက်က ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားအောင် ရသမျှ အကုန် လုပ်မှာပဲ။
ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ တတ်နိုင်သလောက် ၀ိုင်းဝန်း ကူညီကြဖို့ လိုပါတယ်။ ပြောချင်တဲ့ ဆိုလိုရင်းက ခုမှ ရောက်တယ်။ မောထှာ …
ဖဘက သွားမလာတာ.. ဒါလေးဖတ်ကျိ အရီး…
ကျော်စွာမင်းထွတ် says: မြောက်ကိုရီးယား၊ လစ်ဗျား၊ အီရတ်၊ ဆိုဗီယက် ဥပမာတွေ အများကြီးပါ။)
Dear Aunty Mya,
အန်တီမြ ရဲ့ သဘောထားကို
(တကယ်ဖြစ်သင့်တာက အခုလာမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါနိုင် ဖို့ အတွက် အားလုံး ဝိုင်းပြီး ပံ့ပိုး နေသင့်တာ။)
အန်ကယ်ကြီးလိုပဲ မလတ်ပြောတာကို ထောက်ခံတယ်။
ဆန္ဒပြတာ သပိတ်မှောက်တာတွေကို သဘောမကျဘူး။
လူထုဆန္ဒကို နားထောင်ပြီး အမှန်တရားဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးမယ့် ခေါင်းဆောင်ရအောင် အရင်ဆုံးကြိုးစားပြီးမှ အိနြေ္ဒရရ အေးအေးချမ်းချမ်း ဆွေးနွေးပြောဆိုကြရင် ပိုမကောင်းလား။
Page Liked · January 27 · Edited ·
Updated – 4:32 PM
သပိတ်မှောက် စစ်ကြောင်းမှ ကျောင်းသားများနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ ညှိနှိုင်းမှု အဆင်မပြေဘဲ ကျောင်းသားများဘက်က ဂိတ်များကို ဖွင့်ပေးရန် အချိန်မိနစ် ၂၀ ပေးထားကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသို့ အချိန် မိနစ်၂၀ အတွင်း ဖွင့်ပေးခြင်းမရှိပါက သပိတ်မှောက်စစ်ကြောင်း အနေဖြင့် အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှား၍ ရှေ့ဆက်တိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
(Wynn Htainoo shared Eleven Media Group’s photo.
January 27 at 6:39pm · Edited ·
.နဲနဲ ထပ်ပြောဘို့ ကျန်နေလို့ဗျာ….
.၁၉၈၈(၁၉၈၉) တုန်းက ကျုပ်တို့ ညံ့လွန်းလို့ ၊ မစီမံတတ်လွန်းလို့ ၊ အတ္တကြီးလွန်းလို့ ၊ မစည်းလုံးလို့ ၊ အမြင်မရှိလို့ …+++++
… လို့ တိုင်းပြည် စစ်ကျွန်ဖြစ်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ…..
… ဒေါ်စုက အခုလောက် မတော်သေးဘူးထား… အရမ်းတော့လဲ ညံ့လှတယ်မဟုတ်…
.တကယ်က … ဒီကောင်တွေက ကိုယ့်ထက်တော်လို့ … (ကိုယ့်ထက်တော်လို့)
.အဲသည် ဒီကောင်တွေပဲ အခု အစိုးရလုပ်နေတာလေ…
.စစ်ဦးစီး တက္ကသိုလ်မှာ ဘာတွေသင်ရတယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါနော…
.တကယ်က စိတ်နာလွန်းလို့သာ ဒီကောင်တွေကို ညံ့တယ်လို့ နှိမ်ပြီးပြောရတာ
.တိုက်ပုံလေးဝတ် ခေါင်းပေါင်းလေးပေါင်းပြီး လူကြိုက်တဲ့စကား သံယောင်လိုက်တယ်ဆိုတာ
.ဒီကောင်တွေ တတ်တဲ့ မျက်လှည့်ထဲမှာ မူကြိုတန်းအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်..
..ဒါကြောင့် အမကြီးက ခဏခဏပြောတာ.
.အကောင်းမြင်လွန်းနေတယ် … တဲ့
အခုအချိန်မှာ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်း အဆင်ပြေစွာရပ်တည်နေတဲ့သူတွေ ပုံမှန်ဝင်ငွေရ အလုပ်ရှိသူတွေက အခုလို ကျောင်းသားတွေ လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတာကို မလိုလားကြတာများပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၈၈ တုန်းကလို စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြန်လည်နိုးထ အာဏာသိမ်းမှာကို စိုးရိမ်ကြဟန်ပါဘဲ၊ ဒါလဲ ဖြစ်သင့်တဲ့ ပြောဆိုမှုတွေပါဘဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲလို အလုပ်ဝင်ငွေတွေရပ် ကသောင်းကနင်း ဖြစ်ကြမှာကိုး ဒါလဲ ကိုယ့်ထိမှာမို့နာကြဟန်ပါ။
ဒါပေမယ့် လူတန်းစွာအလွှာအသီးအသီးအရဘဲကြည့်ကြည့် တိုင်းပြည်အနာဂတ်နဲ့ဘဲကြည့်ကြည့် ဒီလိုသာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်(၆၀)ထဲက ဒီပညာရေးဥပဒေပြင်ဖို့ တောင်းဆိုထားခဲ့တာပါ အဲဒီ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း လွှတ်တော်ကဒါကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ထိုကာလမှာ သူတို့ဘာကိုဂရုစိုက်လုပ်ခဲ့လဲဆိုသော သမ္မတကြီး လစာပိုတိုးပေးသင့်တာနဲ့ လွတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ လစာနှုန်းဆယ်သိန်းပြင်သတ်မှတ်တဲ့ အဲလိုတိုင်းပြည်နောင်ရေးအရေးကြီးတာကိုဘဲ အားစိုက်လုပ်ခဲ့တာ သတင်းတွေဖတ်မိရင်တွေ့ကြမှာပါ။ ထိုရက်(၆၀)လွန်မှ ထိုင်နေလို့တော့ ဘာမှမဖြစ်လာဘူး လို့ ကျောင်းသားတွေယူဆပြီး အခုလိုဆန္ဒပြကြတာပါ၊ ဒီလိုလုပ်တာ ကလေးတွေအတွက် လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်အခန့်မသင့်ရင် ထောင်နန်းစံနှိပ်ဆက်ခံ ရနိုင်တယ် သေနတ်နဲ့ ပစ် သေချင်လည်းသေနိုင် တယ် သူတို့လေးတွေ အဲလိုမျိုးကြုံနိုင်တယ်ဆိုတာ သိရက်နဲ့ သရဏဂုဏ်တင်ပြီးချီတက်ကြတာလေ။ အစိုးရရဲ့ အရင်အကျင့်ဆိုး ငါတို့ပြဌာန်းချင်တာ ပြဌာန်းမယ် ပြည်သူတွေ ကျေနပ်နပ် မကျေနပ်နပ် လိုက်နာပြန်မပြင်ခိုင်းနဲ့ ပါးစပ်ပြောလက်မပါဒီမိုကရေစီလွှတ်တော် အကျင့်ကို မခံနိုင်လွန်းလို့ တွန်းလှန်ဖို့ ချီတက်ကြတာလေ။ အမှန်တော့ သူတို့တွေလည်း စနစ်ဆိုးအမွေကို လက်ဆင့်မကမ်းချင်လို့ပါဗျာ။ အခုဆို ငါတို့လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်မရတာတွေရှိလာပြီဆိုတဲ့ အတွေးအစိုးရလူကြီးတွေမှာ ရှိသွားတာကိုက ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ အဆင့်တစ်ခု အောင်မြင်မှုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
အဲဒီရဲ့နောက်အကျိုးဆက်က ၄၃၆တွေဘာတွေတောင် လျော့ပေါစဉ်းစား ပြင်ချင်ပြင် လာမလား တောင်မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်ကို ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့မှန်းမသိတာ ကလေးတွေကို အပစ်မတင်ကြပါနဲ့ဗျာ။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဓာတ်ပုံတွေကို ကျောင်းနံရံတွေပေါ်ကနေ အဓမ္မမောင်းထုတ်၊ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ တို့ရဲ့ ပုံတွေကို နံရံပေါ်အတင်းလာတင်တဲ့ သမိုင်းတရားခံအစစ်တွေကို ခင်ဗျားတို့ အပစ်တင်ကြစမ်းပါ။
ကျောင်းတွေမှာ အာဇာနည်နေ့မလုပ်ခဲ့ရတာ ဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလဲ။ အာဇာနည်နေ့မှာ တရားဝင် လွတ်လပ်စွာ ဥသြဆွဲခွင့်တောင် ခင်ဗျားတို့ရခဲ့ကြရဲ့လား။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုရည်မှန်း ကျောင်းတွေမှာ အမျှဝေ ဆွမ်းကြွေးတာမျိုးတွေ ဒီခေတ်မှာ လုပ်ခွင့်ရခဲ့သလား။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ပညာသမိုင်းမှာ ဖျောက်ခဲ့တာ ဘယ်လောက်ကြာသွားသလဲ ပြန်တွက်စစ်ကြည့်စမ်းပါ။ ဒီခေတ်နဲ့ ပြန်စစ်ရင် ၁၈ နှစ်နဲ့ ၂၀ ကြား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ကိုမသိတာ ခင်ဗျားတို့ သမိုင်းတရားခံစစ်ကို ရှာကြည့် ကြစမ်းပါ။ ကလေးတွေကို အပစ်မတင်ကြပါနဲ့ဗျာ။
” နောက်ဆုံးတော့ ကျောက်လုံးဘဲ အကယ်ဒမီရတာပါဘဲ ”
မိန့်ခွန်း တက်ဟောတဲ့ ကျောင်းသူလေးက ၊
” ကျမတို့ ဘာပဲလုပ်လုပ် ၊
စစ်အာဏာရှင် စံနစ်ကို ဆန့်ကျင်ပါတယ် ” တဲ ။
အင်းးးးး ၊ ဘာပဲ လုပ်လုပ် ၊ ဘယ်လိုဘဲ လုပ်လုပ် ၊ ဘယ်သူဘဲ လုပ်လုပ် ၊
နောက်ဆုံးတော့ ကျောက်လုံးဘဲ အကယ်ဒမီရတာပါဘဲ ။
ဘယ်လိုဘဲ လုပ်လုပ် ၊ နောက်ဆုံးမှာတော့ ၊
တတိုင်းလုံး တပြည်လုံး ကနေပြီးတော့ ၊
စစ်ခွေး တွေကို ရွံရှာ မုန်းတီးနေတဲ့ ကိစ္စမှာဘဲ ၊
ဇတ်လမ်းက သွားဆုံးတော့ပေသကိုး ။
.ဘဖော စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခု ရှိနေပြီပေါ့။ ပွဲတောင်းပါတယ်၊ မချွင်းမချန်လေး ပြောပြပါဦး။
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလာတဲ့အခေတ်မှာ ရလာတဲ့ အခွင့်အရေးကို ရဲရဲကြီး အသုံးချတတ်တဲ့ အတွက် ဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါ။
လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ ခေတ်မှာ ဘာမှ မလုပ်ရဲခဲ့တဲ့အတွက် (ပြောရရင် ၂၀၀၇ခုနှစ်တုန်းက နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာ ဘာဦးတည် ရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိဘဲ သူငယ်ချင်း ၁၀ယောက်ကျော် လွယ်အိပ် အနီရောင် ဆင်တူဝတ်ခဲ့တာကိုတောင် တာဝန်ရှိသူတွေက လာရောက် သတိပေးတာ ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်) ဘာမှမလုပ်ခဲ့မိတာကို နောင်တရမိလို့ မဆုံးပါဘူး
ဒီကိစ္စကို ပြဇာတ်တပုဒ်လို့ ထင်နေမိတယ်။
ဒီပြဇာတ်ကနေ ဒုတိယ မင်းကိုနိုင်၊ဒုတိယ ကိုကိုကြီး ၊ဒုတိယ…တို့ ထပ်ရလာမှာတော့ အမြတ်ရမယ် ထင်တယ်။
ကျောင်းသားဘဝတုန်းက အများအကျိုးရှိသွားစေတာလေ ဆစ်ခု လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ကျောင်းကားတွေ မလုံလောက်လို့ ကျောင်းသားတွေဒုက္ခရောက်ရကြောင်း RFA က အော်ဖူးတယ်။
RFA မှာ အော်လို့ဆိုပြီး မထသ အစည်းအဝေးနဲ့ စီစဉ်ပေးခဲဖူးတယ်။
အနီးအနား စပ်မိလို့ပြောမိကြတဲ့ထဲ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့မောင်ညီမငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတချို့ရဲ့ပတ်သတ်ကြောင်းတွေထဲမှာ
သူ့မောင်လေးက ပြန်ပြောသတဲ့ ကျောင်းကကောင်တွေလှောင်မှာပေါ့ ရှက်စရာကြီး ပါမှာပဲ တဲ့
အမျိုးထဲက ကောင်မလေးအုပ်စုတစ်စု သပိတ်မှောက်ဖို့ ပြောဆိုနေကြတာကြားလို့ သူ့အမေက
မသိဘူးလေ ဦးဆောင်တဲ့လူတွေသိရင်ပြီးတာပဲ တဲ့ သူများပါပြီး ကိုယ်မပါရင် fbမှာ ပြောင်ကြ နှိမ်ကြမှာပေါ့ တဲ့
မမှောက်သေးတဲ့ကျောင်းတချို့က ကျောင်းသားတစ်ချို့ကလည်း တခြားကျောင်ေးတွေလုပ်နေပြီ ငါတို့မလုပ်ကြသေးတာ ရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီး မြို့ဂရုထဲမှာအော်ထားကြတာ ဟိုနေ့ကပဲဖတ်ရတယ်။
ကလေးတွေ အမှန်ကိုသိ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တော့ လုပ်စေချင်တယ်။
ဒီတစ်ပွဲတော့ တစ်ရွာလုံး နဲ့ တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီလား တွေးတာ။
တော်သေး။ ကိုယ့်လို ရှုဒေါင့် မှာ ရပ်သူ တွေ ရှိနေသေးလို့။
မယ်ဝါး လေး မျှပေးတဲ့ စာထဲ အကြောင်း ကို ထပ်ဆွေးနွေး ချင်ပါတယ်။
ဒီကျောင်းသားသပိတ်က အခြေအနေ၊ အချိန်အခါ သင့်တယ်လို့ ပြောရမယ်။ ခုကာလက အများ သိကြတဲ့အတိုင်း ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းရေးလို့ အစိုးရက အော်နေတဲ့ ကာလ။
အရီး ကတော့ အချိန်အခါသင့် တယ် ဆိုတာ ဘယ်သူ တွေ ဘက် ကို ပြောတာလဲ ဘဲ မေးချင်ပါတယ်။
လောလောဆယ် မတော့ အခြေခံ ဥပဒေ ကို ပြင်ဖို့ အတွက် နောက်ရောက်သွားစေဖို့ အခွင့်အခါ
အချိန်ကောင်း ဖြစ်သွားတာတော့ အမှန်ဘဲ။
ကိုကြီးမိုင်း Post မှာ မေးခဲ့ သလိုဘဲ။
“Guy Fawkes mask” တွေ မသိမသာ ဖောက်လိုက် တဲ့ လမ်း ကို တမင် လိုက်နေတာလား?
မသိဘဲ ယောင်တောင် ပေါင်တောင် လိုက်နေတာလား?
နောက်ပြီး အတော်လေး အံ့ဩဖွယ် တစ်ချက် က လေ။ သိလား။
ခေတ်အဆက်ဆက် ကျောင်းသားတွေ ရဲ့ ရဲရဲတောက် ပြခဲ့တဲ့ သပိတ် တွေ ဟာ နယ်ချဲ့ ကို တိုက်ထုတ်ဖို့၊ မဆလ ကို ဖြုတ်နိုင်ဖို့ အတွက် ပါ။
အခုလို ဟိုမရောက် ဒီမရောက် မထိ တထိ နဲ့ တောင်းနေခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။
ဒီ ကျောင်းသား သပိတ် က ဘာဖြစ်လို့ “နဝတ” အသွင်ပြောင်း တွေ ကို ဖြုတ်ဖို့ မတောင်းဆို ကြတာလဲ။
ကျောင်းသား ဆိုတာ လူ ကို ဖား နေတာ ကြောက်နေတာ မဟုတ် ရင် ပြည်သူတွေ တင် မထား တဲ့ ဒီ စစ်အစိုး ရ ဖယ်ဖို့၊ ပြည်သူ့ ဆန္ဒ အတိုင်း (ဘယ်သူ့ ကို ပေးပေး နော်၊ စိတ်ကြိုက် ရွေး ) မဲ ကို အမှန်အတိုင်း ဖြစ်ဖို့ တောင်း ကြပါတော့လား။
တကယ် ဥပဒေ ပြင်လဲ ဘုတ်အုပ် ထဲ မှာဘဲ ရေးပြီး တကယ်လုပ် ပေး မဲ့ စေတနာ မရှိ သူ တွေ လက်မှာ လက် တွေ့ ဖြစ်မလာမဲ့ ဘာမှ မထူးခြား မဲ့ အကြောင်း အတွက် လုပ် နေတာ လို့ ဘဲ မြင်ပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ လုပ်ချင်လား။ လုပ်ပါလေ။
“ပူးသတ်” တယ် ဆိုတဲ့ စကား၊ “အဆင်း ဘိန်းတွန်း” တယ် ဆို တဲ့ စကား တွေ ကို
ဒီအတိုင်း ဆက်ပြီး ရှိနေ ဦး မဲ့ စစ် အစိုးရ ရဲ့ လက်ထဲ မှာ ထပ်ဖြစ်လာမဲ့
နောက်မျိုးဆက် တွေ သိဖို့ အတွက် သမိုင်း ချန် လိုက်ပေါ့။
အမှန်ဖြစ်သင့်တာက လာမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ကိုယ်ကြိုက် သူ ကို ပြည်သူတိုင်း စိတ်တိုင်းကျ မဲ ပေးခွင့် ရပြီး
မှန်တဲ့ ရလာဒ် ရဖို့ဘဲ။
အများကြိုက်လို့ ဦးသိန်းစိန် တို့ နေရာ ရ လဲ ယူပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သမ္မတ အဖြစ် မြင်လို တဲ့ ပြည်သူ တွေ အတွက် လဲ တမင် ဖိနှိပ် ထား တဲ့ အခြေခံဥပဒေ ကို လဲ ပြင်ပေးဖို့ လိုမယ်။
ဒါမှသာ တရားမျှတ တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ရဲ့ အဖြေ ရပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ဟာကို တိုင်းပြည် အတွက် တကယ်ဘဲ စေတနာ ရှိ တယ် လို့ မှတ်ထားကြ ရင် ကြောက် မနေ ကြပါ နဲ့။
ပြည်သူကို အခွင့်ပေးလိုက်ပါ လို့ ဘဲ ပြောချင်ပါတယ်။
ပြည်သူ တွေ ဆိုတာ ကလဲ ဒီနေ ခေတ် မှာ လက်ရှိ အစိုးရ ရဲ့ တန်ခိုး နဲ့ အဆီယစ် နေသူ တွေလဲ များနေတာမို့ သိပ်ပြီး မစိုးရိမ် ပါ နဲ့ လို့လဲ မှန်းလိုက်ပါရစေ။
ကလေး တွေ ကတော့ ကလေးမို့ ထားပါတော့။
ဒီအချိန်မှာ အဓိက နဲ့ သာမည ကို ခွဲ မသိနိုင် တဲ့ လူကြီး များ ကိုတော့ …….
နောက်ဆုံးတော့ လူဆိုတာ ကိုယ်နဲ့တန်ရာ တန်ရာ ဘဲ ရတယ် ဆို တဲ့ စကား က အလကား ပြောခဲ့တာ မဟုတ် ဘူး ဆို တဲ့ အကြောင်း ၂၀၁၅ အလွန်မှာ သိရတော့ မှာပေါ့။
ချမ်းသာသူများ ပိုပို ချမ်းသာလာပြီး ဆင်းရဲသူများ လဲ မြေကြီး ထဲ ဝင် စရာ မြေကြီး တောင် မရှိတော့ တဲ့ လူနေမှု အဆင့်အတန်း အကွာဟ ဆုံး ထိပ်တန်း နိုင်ငံ လို့ သာ ကြိုပြီး ဂုဏ်ယူထားကြပေတော့။
ဖားတတ်သူ များ ၊ အကပ်ကောင်းသူများ၊ အမျိုးချစ်သူများ ဆက်လက် နေရာရ ကြီးပွါးစေသတည်း။